Public Voice Television – PVTV Myanmar
·4months ago ·2 Comments
Like – 3.3K, Share – 166
တု နှုိင်း ခ says:
2021-09-21 at 9:06 PM
ထာဝရ သစ္စာ says:
2021-09-21 at 9:35 PM
မြန်မာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာလူမျိုးအားကိုနေတဲ့Kia. Knu. Pdf. Cdf. Cna တို့ တိုက်ပွဲ့တိုင်းမှာအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်..
တဈနတေ့ာသတငျးအစီအစဉျမြားကို နစေ့ဉျ ည၈ နာရီခှဲအခြိနျတိုငျးမှာ CRPH, NUG, Radio NU